Ngathi - Shandong Shallow Yong Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle, Ltd.
Shandong nzulu Yong Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle, Ltd.
Izakhono kunye namava
Emva kweminyaka esibhozo yophuhliso olukhawulezayo, ukubamba kuye kwaqonda ngokuthe ngcembe ukukhula okuncinci ukusuka kokuncinci ukuya kokukhulu, ukusuka kubuthathaka ukuya komeleleyo. Iimveliso ezivela kuyilo, uphando kunye nophuhliso ukuya kwimveliso yokugqibela, konke kungokwenkampani. Okwangoku, inkampani iyile imo yolawulo kunye nolawulo lwendlela yokwazisa, inkqubo, ukumiselwa komgangatho, inkqubo kunye nedatha, kwaye inezixhobo zemveliso ezisezingeni eliphambili. Izixhobo ze-CNC zisetyenziselwa ukugqiba inkqubo yokugqibela yokujika, kwaye i-CNC yokugaya kunye nokugqiba inkqubo ifikelele kwi-100%. Kwangelo xesha, izixhobo zokugaya eziziiprayimari eziphindwe kabini zisetyenziselwa ukuqhutywa kwemigca emibini. Ukongeza, i-lathe nkqo ye-CNC kunye ne-CNC ethe tyaba zonke zisetyenziswa kwiworkshop enkulu kakhulu, kwaye inqanaba lokuchaneka kweemveliso ezingaphezulu kunokufikelela kwi-P5, eqhubeka ngakumbi iphucula ukuchaneka kweemveliso. Inkampani ineentlobo ezingaphezu kwe-300 zeebheringi ezingaqhelekanga kunye neebheringi ezizodwa unyaka wonke, kunye ne-SL / NCF egcwele i-roller cylindrical roller (sl181840-sl1818 / 500, sl183024-sl183080, sl182924-sl182980, ncf1840-ncf18 / 500, ncf3024- ncf3-80, ncf2924-ncf2980) zikhona ngokupheleleyo. Ilungele ukucheba, ukunciphisa isithinteli sekhonkrithi, impompo ye-hydraulic, oomatshini bobunjineli, i-ore, isinyithi, ukwakhiwa kweenqanawa zeoyile kunye namanye amashishini. Ibhola yegreyidi enzulu ethweleyo (uhlobo lwehashe, uhlobo), ukuthwala okungagqitywanga ngombane, ukujikeleza okungqukuva (CA, MB, e, E1), SL / NCF egcwele umthwalo we-roller cylindrical (sl181840-sl1818 / 500, sl183024-sl183080, sl182924-sl182980, ncf1840-ncf18 / 500, ncf324-ncf3-80, ncf2924-ncf2980) zigcwele ngokupheleleyo. Ilungele ukucheba, ukunciphisa isithinteli sekhonkrithi, impompo ye-hydraulic, oomatshini bobunjineli, i-ore, isinyithi, ukwakhiwa kweenqanawa zeoyile kunye namanye amashishini.
Ubuchwepheshe Advanced, Obusemagqabini ubunjani, inkonzo efudumeleyo kunye nolwazelelelo emva-intengiso ukwenza Futai ukuphuhlisa ngokukhawuleza kwiminyaka nje embalwa, kwaye iye yaba nkulu kunye noshishino lemveliso e-Asia ukuba reducer kwezithuthi zothutho eziphathekayo, umchebi, impompo hydraulic ethwele yokuluka kunye Yong nzulu ethwele. Qhubeka nokuxhasa ingqiqo entsha yophuhliso "inzululwazi netekhnoloji njengamandla, umgangatho wobomi", ukuze kuphuhliso lokuvelisa ishishini, qianyong ethwele kungekuphela nje ukulandela ukukhokelwa kwasekhaya, kodwa kananjalo kuzimisele ukungena kumhlaba wokuthwala umhlaba. Iimveliso zisetyenziswa ikakhulu kwimigodi nakwisinyithi, oomatshini bokwakha, izixhobo zomatshini kunye nee-motors, kwaye zithengiswe kakuhle kumazwe angaphezu kweshumi nakwimimandla ese-Yurophu, mpuma weAsia nakuMbindi Mpuma.